The New Big Deal nke Influencer Marketing - na ihe atụ | Martech Zone
Ekwesịrị m ịmalite site na ịsị echefula Douglas KarrIhe ngosi banyere mgbasa ozi influencer na Social Media Marketing World!
Gịnị bụ Ahịa Influencer?
N'ụzọ bụ isi, ọ pụtara ịkwenye ndị mmadụ nwere mmetụta, ndị na-ede blọgụ ma ọ bụ ndị ama ama nwere nnukwu soro iji kwalite akara gị na akaụntụ ntanetị nke onwe ha. O doro anya na ha ga-eme ya n'efu, mana nke bụ eziokwu bụ ị kwụrụ ụgwọ igwu egwu. Nke a bụ ahịa na-eto eto na nloghachi nwere ike ịnye akara nnukwu ọganiihu gị ma arụ ọrụ ọfụma.
Amaara m na nke a nwere ike ịdị ntakịrị dijitalụ azụ-uzo warawara ma ọ dịghị ihe dị ọhụrụ ma ọ bụ ihe ndo banyere ụdị mgbasa ozi a, ma ọ bụ dịka anyị na ụlọ ọrụ na-amasị ịkpọ ije ozigbo. N'oge gara aga, ị ka ga-anụ, Nike kwadoro Michael Jordan or Roger Federer na-eme nde 71 kwa afọ site na ndị nkwado. Ka oge na-aga na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ike, Nadal kwụrụ $ 525,000 iji were elekere na oghere French or Tiffany & Co. na-akwụ ụgwọ Anne Hathaway $ 750,000 na Oscars. Taa, ụlọ ọrụ ndị a nọ kwupụta agha iji kwụọ ndị mmadụ ụgwọ ịkwalite ngwaahịa ha (ka anyị kpọọ ya ihe ọ bụ) ya na kpakpando dịka Jennifer Lawrence.
Ma gịnị banyere ụwa ndị ọzọ? Enwere ndị ọzọ nwere mmetụta na ụdị nwere ike ịkwụ ụgwọ iji kwalite ngwaahịa ha? Ndị mmadụ na blọọgụ ma ọ bụ nwee akụkọ mgbasa ozi ọha na eze na-ewu ewu nwere oke ahịa zuru ezu iji kpata mgbasa ozi mgbasa ozi?
Eeh. A na-ehibe ụlọ ọrụ dum gburugburu ụdị mgbasa ozi a, koodu akpọrọ ahịa ahịa. Companieslọ ọrụ Fortune 500 kpọrọ ya nwa afọ mgbasa ozi, Ndị ụlọ ọrụ na-ere ahịa ọdịnaya na-akpọ ya mgbasa ozi ma kachasị ama Blogger ma ọ bụ Mgbasa Mmetụta. Nke a agaghị agbagọ vidiyo vidiyo ma ọ bụ “nkwado tweets”Ma ọ bụ akwalite Facebook posts. Ihe ndị a bụ ngwa arụpụtara ozugbo na nyiwe mgbasa ozi dịka Twitter na Facebook.
Hụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị a abụghị ihe ha bụbu. N'otu oge, ebe ezinụlọ na ndị enyi ga-ekerịta foto ma nọrọ na nzuzo, abụrụla ihe ngosipụta dị mma nke ọma maka ịlele ndị na-ege ntị n'ụzọ ziri ezi. A na-eji otu nyiwe ndị a eme ka ozi sitere na ụdị ndị na-ede blọgụ, ndị mmadụ, na ndị na-akwalite ngwaahịa gburugburu ụwa. Mana obughi otutu ọdịnaya ka emebere. Site na ndị na-eme ihe nkiri na-erute ọtụtụ nde mmadụ nọ na niche demographics, egwuregwu agbanweela maka ndị mgbasa ozi.
Kpọọ ya ihe ị ga-eme, akara ntụ dị n’etiti ụdị na-eke ọdịnaya na akara na -emepụta mgbasa ozi ahaziri ka ọ ga-adị ka ọdịnaya agafeela ogologo oge gara aga. Taa, ọ bụ ya bụ isi na FTC gbanwere ụkpụrụ nduzi ha na endorsements na 2009 na ntuziaka na mgbasa ozi dijitalụ na 2013. Hụ ya n'anya ma ọ bụ kpọọ ya asị, ọ bụ iwu, ụdị na-eme ya, ndị na-emepụta ọdịnaya na-enweta site na ya, nnukwu oge.
Yabụ, kedu ka ika gị ga-esi rite uru site na ahịa influencer? Maara ma ọ dị mma maka azụmaahịa? Ahapụ ka anyị tụlee ụfọdụ ihe atụ, ngwanrọ na atụmatụ nke nwere ike ibido gị n’ọsọ ahịa dijitalụ!
Ihe Nlereanya Azụmaahịa
Dabere na mmefu ego gị ị nwere ike mmetụta onye amara, mgbasa ozi, blog ma obu bu onye ama ama na Facebook. Ka anyị nyochaa ụfọdụ ihe atụ nke ndị a iji ghọtakwuo otu ọrụ si arụ ọrụ.
Youtubers - Were Pixiwoo, Ha bụ ụmụnne nwanyị nwere nde mmadụ 1.7 nwere mmasi ime-elu. Na-agba ọsọ a free dijitalụ anam-elu magazin ma tinye onwe ha site na ha blog, Youtube ọwa, na-elekọta mmadụ media ejiri dị ka ndị ọkachamara na anam-elu. Rịba ama na Na-arụ ọrụ US: Business jụrụ… na banyere m ngalaba nke na peeji nke.
Pinterest - Pinterest nke otu n'ime ahịa kachasị emetụta na weebụ. Ọtụtụ PinPro si dị ka m na-achọ ịkpọ ha, nwere ọtụtụ nde ụmụazụ na mmetụta siri ike na omume ịzụrụ n'ime obodo. Banye Kate Arends, PinPro nwere nde 2.6 na ndị na-eso ụzọ ya na nnukwu mmetụta na ụdị mma na ụdị ejiji. Kate na-agba ọsọ a Ngwaahịa osisi na ya Pinterest nke ọ bụla nwere njikọ ebe ịzụta ihe ahụ.
Twitter - Twitter bụ ala nke mgbochi mkpụrụ ndụ 140, mana nke a egbochighị ọtụtụ puku ụlọ ike mmadụ nwere ike ịnweta ọtụtụ nde ndị ahịa maka ụdị ha. Were dị ka ihe atụ @MrScottEddy - Onye nnọchi anya mba ụwa maka @Zipkick - ngwa ntinye akwụkwọ njem. N'ime ihe karịrị ọkara nde ndị na-eso ụzọ, ị ga - ahụ ihe kpatara ya ji dị mma PR maka Zipkick!
Facebook - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ influencer ọ bụla na netwọk ọ bụla nwere Facebook. Facebook abụghị isi ihe na - akpata mmetụta ndị ahịa, mana ọ bụ n'ezie mgbakwunye siri ike na ngwa agha nke ndị na - emetụta ya. Ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ maka onye na - eme ihe ọ bụla, ha ga - eziga ọdịnaya gafee ọwa niile, gụnyere Facebook. Na ụdị dịgasị iche iche nke ụdị ọdịnaya, ikpo okwu a bụ nnukwu ngwaọrụ izi ozi. Enwere ike ịhụ otu ihe atụ nke a na Sydney Leroux, onye egwuregwu bọọlụ ọla edo n'egwuregwu Olympic.
vine - Viner na-ewu ewu (306K) Megan Cignoli na-arụ ọrụ maka ezi ole na ole ụdị na Vine, gụnyere na-emepe emepe onye a Vine video maka Warner si Bras. Dabere na AdAge, ha malitere ndoro-ndoro #getcomfortable ha na ndi na-eso uzo efu wee biarue ihe ruru 5,000. Omume niile nke mmadụ na-erute 500,000 mmasị, ihe na nyocha, na-eru nde 9.8 nwere ike.
Blọọgụ - you jụọla Douglas Karr banyere Martech Zone's mmetụta? Ọ ghọọla ebe etiti maka ndị ahịa na-enyocha ma ọ bụ na-ekpebi mkpebi ịzụ ahịa azụmaahịa ha na-esote. Martech Zone nwere ụlọ ọrụ na-eme nke ọma n'azụ ya, DK New Media, ndị na-enyere nnukwu ụdị na ụlọ ọrụ teknụzụ azụmaahịa aka ịbawanye ahịa ahịa ha. Ha na-ajukwa ndị na-etinye ego na ohere itinye ego, nyocha asọmpi, wdg. Na peeji nke mgbasa ozi, Doug kọwara weebụsaịtị ya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-enye ụzọ dị mfe maka ụdị iji nweta aka.
Instagram: @Ighara dị anya site na onye nrụpụta kachasị na Instagram, mana ọ ka na-agbanye 250K na-eso ezigbo mma. Thosedị ụdị ọnụọgụ ndị ahụ nwere ike ịmata ma rite uru site na mgbasa ozi na-aga nke ọma. @Swopes nwere ndị otu na-eto eto, nke na-agbasosi ike karịa ndị otu na-eso nke a site na itinye ọkwa nke Moet & Chandon ma nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 7.5K mmasị.
Ebee ka ịchọta ndị nwere Mmetụta?
Ugbu a ị maara na ndị na-eme ihe nkiri nọ ebe ahụ ma ụdị ndị a na-eji ha eme ihe, mana ị maara etu? Ka anyi kwuo na odi uzo di nfe na uzo siri ike. Uzo siri ike bu uzo mbu eji eme ihe na ulo oru, nyocha. Nke a na-apụtakarị ịchọta ogologo oge ịchọta, ịkpọtụrụ, kwenye, na-akparịta ụka, ịhazi ọdịnaya, mmejuputa, nyocha na ịtụ nha. Nke a nwere ike bụrụ ihe na - agwụ ike ma na - ewe ọtụtụ ndị na - arụ ọrụ oge niile iji mezuo. Jụọ ọ bụla PR, SEO, na-elekọta mmadụ ma ọ bụ ndị ọzọ dijitalụ ahịa gị n'ụlọnga na ha ga-agwa gị otú oge na-ewe ụdị a ahịa nwere ike ịbụ.
Laa azụ afọ 5 gara aga ụlọ ọrụ SEO m jisiri ike nyefee onye ọrụ 1 ịchọta & kọntaktị ndị na-ede blọgụ na onye ọzọ iji kparịta, jikwaa ma soro otu mkpọsa… maka naanị otu onye ahịa! Jeff Foster, onye isi oche nke Tomoson.
Site na nkụda mmụọ ịchọta & ịkpọtụrụ ndị na-eme ihe ike n'ụzọ dị oke ọnụ na n'oge kwesịrị ekwesị, ahịa ahịa influencer amalitela ịmalite. Lọ ọrụ wuru nyiwe nke kwere:
Ndị na-emetụta ya ịdebanye aha ma gosipụta ndị na-eso ụzọ mmekọrịta ha na ebe nrụọrụ weebụ.
Dị zụrụ nkwado nkwado site na iji bọtịnụ.
Platformslọ ahịa ndị a ma ama n'ahịa ahịa bụ:
Tomoson - blogger na obodo azụmahịa
Nsogbu - Youtube Ndị na-emetụta ya
Tomoson na-enye ohere maka ụdị itinye ọdịnaya dị mkpa chọrọ ma nwee ndị na-ede blọgụ dị mkpa itinye maka edemede ahụ. Nke a na - echekwa ụbọchị ọrụ ma na - enyere aka aka belata onye edemede zuru oke. Ndị na-ede blọgụ nwere mmetụta dị mma na mkpịsị aka nke ụdị na Tomoson.com Onye ọ bụla nwere profaịlụ na-egosi ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ ha na ahịa niches dị egwu.
Software Mgbakwunye Ahịa
Enwekwara ngwanrọ dị na ya nke na-enye ndị ahịa ohere ịchọta ndị nwere mmetụta na mgbasa ozi mmekọrịta. N'adịghị ka ahịa ndị dị n'elu, ndị na-ede blọgụ ị na-ahụ site na ngwaọrụ ngwanrọ ndị a anaghị abanye. Ndi mmadu a nwere ike edebanyeghi onwe ha ma kwuo ee, m dị njikere ịme nkwado”Maka $ 500. Kama sọftụwia ahụ na-akpụgharị na weebụ, na-achọ usoro ndị dị elu na ọnụọgụ weebụ dị elu. Ozugbo agakọtara, nke a na-enye ndị ụdị ohere ịchọpụta na ịgakwuru ndị a na - eme ihe ike.
On Tomoson ọ dị mfe ịchọta ọ bụghị naanị ndị na-ede blọgụ nwere mmetụta mana ndị na-ede blọgụ dị mkpa, dị njikere ide ọdịnaya na-atọ ụtọ ma na-adịghị mma maka ngwaahịa gị.
Ebumnuche Azụmaahịa Mgbanwe
Mgbe ị na-eche atụmatụ, ịkwesịrị ibu ụzọ chee maka akara gị. Kedu ndị bụ igwe mmadụ ị lekwasịrị anya, gịnịkwa bụ ihe omume ntụrụndụ ha? Nye ka ị na-achọ iru? Mama mama blogger onye hụrụ ọrụ aka n'anya ma jiri ụbọchị ya niile na-atụgharị na Pinterest? Nnukwu onye njem mmefu ego nke jet na-achọ nnukwu foto foto Instagram? Ma ọ bụ ikekwe nwa agbọghọ nọ n'afọ iri na ụma na-amụ ihe etemeete na-arụ ọrụ kachasị mma na ọdịdị ya na Youtube. Ọ bụ ihe niile banyere ika na iche. Ndị na-emetụta ya nwere ike ịbụ nhọrọ dị ike na azụmaahịa dijitalụ mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi ma dị mma, na-akpali akpali, na-atọ ọchị, ma ọ bụ nke bara uru ka a na-enyefe na igwe mmadụ ziri ezi.
Were Marriott dịka ọmụmaatụ, Ha chọtara ndị na-ede blọgụ 8 dị oke egwu site na enyemaka nke Diamond PR, nyere ha kredit nkwari akụ na Florida ma hapụ ha ka ha nwee ọ whatụ n'ihe ha chọrọ dịka ọdịmma nke ha si dị. Mgbe ha na-enwe ọ theụ n'efu na-egwu ala, ha gara na ọwa ha dị iche iche wee gwa ụwa maka ahụmịhe dị ịtụnanya ha nwere na Florida Marriott ọ bụla.
Mgbe ị na-ere ahụmịhe (karịa ngwaahịa) dị ka Marriott, ha hụrụ na ọ kachasị mma ịhapụ ndị na-emetụta ya ka ọ nwe ha n'efu ma gwa ụwa banyere ya. Nke a bụ nnukwu ụzọ na ezigbo igbu egbu. TheOutReachMarketer na-akọ nsonaazụ nke mkpọsa a dị ka ndị a:
Nweta 39 blog posts
Jikọtara ndị na-ede blọgụ 8 ruru 1,043,400 pụrụ iche kwa ọnwa
The #Ịde blọgụFL hashtag ruru ihe ruru nde 8 usoro ntinye nke Twitter
Site na Facebook na Instagram, ndị na-ede blọgụ ruru mmadụ 30,000 site na ndị na-eso ụzọ ha
Ezigbo ihe atụ ọzọ bụ mgbe Wendy tụbara ya azụ, na-akpọtụrụ mama na ndị na-ede blọgụ ejiji / ejiji na-enye ha nke ọ bụla na-enweghị ntụpọ. Ebumnuche bụ ịkwalite na ntu oyi dị ugbu a na waffle cones. A gwara onye ọ bụla n'ime ndị na-ede blọgụ ka ọ biputere ọdịnaya nke gụnyere ihe ngosi na-adọrọ adọrọ tinyere ezi ncheta nke Wendy na-atụ. Wendy nwere nnukwu ihe na nke a nwere nnukwu ọdịnaya ejiri ihe niile na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Igodo nke ịga nke ọma mgbe ị na-eji azụmaahịa influencer eme ihe bụ ịmara akara gị na ahịa gị ebido n'ime. Ikwesiri ima ihe ndi ha masiri ha, ihe ndi ha choro na mmasi ha. Digital influencers bụ nanị ad amplifiers. Ihe kachasị dị mkpa na usoro ROI na iru ozi bụ ogo ọdịnaya, na ntuziaka nkwalite ahụ. Y’oburu n’inye GREAT ọdịnaya ma bido ya n’ike n’igwe, ị ghaghi itupu ya n’ogige.
Tags: anne hathawayịde blọgụFacebookahịa ahịainfluencer ahịa azumimpencer ahịa ngwá ọrụNdị na-emerụ ahụinwe mmetụtainstagramizemarriottMens mmamichael jordannadalnichenikeacha uhie uhieonye na-azụ anụ ọhịatapinfluenceonye ahiatiffany & Co.tomosonTwittervine
M hụrụ Tomoson n'anya! M na-eji ha oge niile iji nweta ngwaahịa dị egwu iji nyochaa maka ndị na-egwu m na ọ bụrụla ezigbo ahụmịhe. Emechara m nyocha nke 29 maka ha.
Abụ m onye na-emetụta Tomoson na ha arụ ọrụ ebube. Emeela m ọtụtụ nyocha eziokwu maka ha ma enweghị mkpesa. Ndị ụlọ ọrụ na Tomoson na-arụ ọrụ enweela ọmarịcha ọrụ.
Nnukwu ederede - Ejirila m ụfọdụ nyiwe akpọrọ na post yana Grouphigh (nke dị mma maka ịchọta blọọgụ nwere mmetụta). Echiche dị n'ụzọ kachasị mma n'ịchọta ndị na - eme ihe ike na nyiwe dịka Snapchat ma ọ bụ Tumblr?